ယနေ့မန်းစည်ပင်ရဲ ့ယာဉ်ရပ်နားခ အကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ယနေ့မန်းစည်ပင်ရဲ ့ယာဉ်ရပ်နားခ အကြောင်း
ယနေ့မန်းစည်ပင်ရဲ ့ယာဉ်ရပ်နားခ အကြောင်း
Posted by YE YINT THU on Mar 3, 2012 in Myanma News, News |6comments
မန္တလေးမြို ့လည်ခေါင်အချို ့လမ်းမကြီးများပေါ်မှာ သွားလာနေကြတဲ့ မိဘ ပြည်သူများ အနေနဲ ့ကန် ့သတ်နယ်မြေအတွင်းမှာ ကား။ ဆိုင်ကယ် ယာဉ်ရပ်နား မယ်ဆိုရင်ရပ်နားခ ပေးဆောင်ကြရပါတယ်။ ယခုလက်ရှိ တရားဝင်သတ်မှတ်ထားတဲ့နှုန်းများ ကလည်း အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ပေးဆောင်ရသူ အနေနဲ ့သင့်တင့်မျှတ တဲ့နှုန်းထားများ လို ့ဆိုနိုင် ပါတယ်။
(၁) ဆိုင်ကယ်တစ်စီးတစ်နာရီထိရပ်နားခ ( ၅ဝ ကျပ်နှုန်း) တစ်နာရီထက်မည်မျှကျော်လွန်သည်ဖြစ်စေ (၁၀ဝ ကျပ် နှုန်း )
(၂) ကားတစ်စီး တစ်နာရီထိရပ်နားခ ( ၁၀ဝ ကျပ်နျုန်း) တစ်နာရီထက်မည်မျှကျော်လွန်သည်ဖြစ်စေ ( ၂၀ဝ ကျပ်နှုန်း )
ပြည်သူတွေပေးဆောင်နေတဲ့ အခွန်အခရှိမှလည်း နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများကို ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒါကိုလည်းပြည်သူတွေဖက်က သဘောပေါက်နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝေဖန်ထောက်ပြရရင် ယခုတင်ပြနေတဲ့ မန်းစည်ပင်ရဲ ့ကန် ့သတ်နယ်မြေ ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံရေးလုပ်ငန်းဆိုတာ ရန်ကုန်မြို ့တော်စည်ပင်ရဲ ့စနစ်တစ်ခု ကို ပုံတူကူးချပြီးကောက်ခံနေတဲ ့စနစ်ပါ။ ရန်ကုန်မှာနှစ် အတန်ကြာ ကျင့်သုံးပြီးကာမှ မန္တလေးကို ဒီစနစ်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေသိ ဒီစနစ်ကြောင့် မန္တလေးမြို ့နေပြည်သူတွေအနေနဲ ့စိတ်ကသိကအောက် ဖြစ်စရာတွေအမျိုးမျိုးကြုံတွေ ့နေရပေမယ့်
ယနေ ့စည်ပင်လူကြီးတွေကဘဲ အခြေအနေမှန်ကို မသိတာလား??? သိလျှက်နဲ ့ကြိုးနီစနစ် ရှင်သန် တည်မြဲစေရေး အတွက် မသိချင်ဟန် ဆောင်ပေးနေတာလား ??? ဆိုတာကတော့ မန္တလေးမြို ့နေ လူထုအတွက် အတွေးပွားစရာပါ။ ဒီကြားထဲမှာကောက်ခံရမယ့် နှုန်းထားသိချင်လို့ယာဉ်ပိုင်ရှင်က မေးတဲ့အခါ အခန် ့မသင့်ရင် ယာဉ်ရပ်နားခကောက်ခံတဲ့ ကောင်တွေရဲ ့မိုက်ရိုင်းရင့်သီးတဲ့ အပြောအဆိုတွေကိုလဲကြုံ တွေ ့ရပါသေးတယ်။ တစ်လောဆီတုန်းက မန်းစည်ပင်အကြောင်း ခရေစေ့တွင်းကျသိတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကတော့ အခုလိုအားပေးရှာပါတယ်။
“ သူငယ်ချင်းရေ မင်းတိုင်လဲ အပိုဘဲတဲ့ ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလေလံချထားပေးကတည်းက ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်း စည်ပင်ကကော်မတီဝင်တို ့။ ဋ္ဌာနမှူးတို ့။ ဋ္ဌာနစုမှူးတို့ဆိုတဲ့လူတွေကတိုက်ရိုက်မဟုတ်ရင်တောင်သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဝေစုရပြီး လေလံလုပ်ငန်းရှင်တွေကို ရောင်းစားထားကြတာတဲ့လေ ”
မန္တလေးရဲ့ အထင်ကရ လမ်းမကြီးတစ်ခုအပေါ်က မန်းစည်ပင်ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကတော့ နေစဉ်မြင်နေရတဲ့ မိဘပြည်သူအတွက် အတော်လေးအားရစရာကောင်းပါတယ်။
“ မန္တလေးမြို ့တော် သန် ့ရှင်းသာယာလှပရမည်။ မြို့နေလူထုစိတ်ချမ်းသာစေရမည် ” လို ့ဆိုထားပါတယ်။
ယခုကိစ္စမှာ သတ်မှတ်နှုန်းထားများထက်ပိုမိုကောက်ခံခြင်းရှိပါက ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မန်းစည်ပင်အခွန်ဋ္ဌာန
ဖုန်း ဝ၂-၃၆၁၆ရ (သို ့မဟုတ်) ဝ၂-၃၆၁၇၁ ။ လိုင်းခွဲ ၁၅၁ သို ့ဖုန်းဖြင့် တိုင်ကြားနိုင်ပါကြောင်း မန်စည်ပင်အခွန်ဋ္ဌာနမှူးက သတင်းစာထဲမှာထုတ်ပြန်ကြေညာထားလို ့ကျွန်တော် ကို်ယ်တိုင် အကြိမ်ကြိမ် ဖုန်းဆက်တိုင်ကြား ခဲ ့ဖူးပေမယ့်။
သတ်မှတ်နှုန်းထားများထက် ပိုကောက်နေတာကတော့ လေလံဆွဲလုပ်ကိုင်နေတဲ့ နေရာအားလုံးနီးပါးမှာဖြစ်နေတာ ယနေ ့အထိပါဘဲ။
အခုဆိုရင် “ ဆိုင်ကယ်ရပ်နားခကျပ် ၅ဝ နှုန်းနဲ ့ပေးရင် ကောက်တဲ့ကောင်တွေက ပြေစာမပေးပါဘူး။ ပြေစာလိုချင်တော့ ၁၀ဝ ကျပ်နှုန်းပေးမှပြေစာရမယ်တဲ့လေ ”
တစ်လောဆီက သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ ဖတ်လိုက်ရပါတယ် ၂၆ လမ်း ၈ဝ x ၈၄ ကြားအတွင်းမှာလေလံဆွဲလုပ်ကိုင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်အနေနဲ ့သတ်မှတ်လေလံစည်းကမ်းအား အကြိမ်ကြိမ်ချိုးဖောက်ကြောင်းစစ်ဆေးတွေ ့ရှိရပါသဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်မန်း စည်ပင်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီတော့ ဒီကိစ္စမျိုးတွေကို မန္တလေးမြို ့တော်ဝန်အသစ်ကြီး ဘဘဦးအောင်မောင်းက မည်သို ့မည်ပုံကိုင်တွယ်ပေး မလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာပါ ။
ပထမဦးဆုံး အရပ်သားကတက်လာတဲ့ မြို ့တော်ဝန်ဆိုတော့ ယူနီဖောင်းချွတ်တွေ ကြီးစိုးချယ်လှယ်နေတဲ့ မြို ့တော်စည်ပင်မှာ ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ဆန္ဒကိုပိုပြီးနားလည်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မလား??? လုပ်စားမှာလား??? ဆိုတာတော့ ပိတ်ကားပေါ်မှာ ဆက်လက်ရှုစား ပါလို ့ဘဲအသိပေးချင်ပါတယ်………………….။
အောင်မလေး ကိုရဲရင့်သူရယ်၊ ဘဘအသစ်ကြီးကိုများ ဒီလိုသေးမွားတဲ့ ၅ဝတန် လမ်းဘေး ဘီးခွန်ကောင်တဲ့ ကိစ္စလေးကို “မည်သို ့မည်ပုံကိုင်တွယ်ပေး မလဲ ဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါ” လုပ်နေသေးတယ်။
ကြည့်နေပါဗျာ ….. အဘသစ်ကြီး လက်ထက်မှာ ပျောက်ကို ပျောက်သွားစေရမယ် ….. ”
မပျောက်ရင် ဖုန်း ဝ၂-၃၆၁၆ရ (သို ့မဟုတ်) ဝ၂-၃၆၁၇၁ ။ လိုင်းခွဲ ၁၅၁ ကို ဖုန်းဆက် တိုင်ကြားနိုင်ပါကြောင်း သတင်းစာထဲမှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတယ်လေ
အကိုအမေရိကန်ငတုံးရေ ဒီပို ့စ်ပိုင်ရှင်က ကိုပေါက်လားဗျာ။ဒါနဲ ့လေ…….
ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မန်းစည်ပင်အခွန်ဋ္ဌာန
ဖုန်း ဝ၂-၃၆၁၆ရ (သို ့မဟုတ်) ဝ၂-၃၆၁၇၁ ။ လိုင်းခွဲ ၁၅၁ သို ့ဖုန်းဖြင့်
တိုင်ကြားနိုင်ပါကြောင်း မန်စည်ပင်အခွန်ဋ္ဌာနမှူးက သတင်းစာထဲမှာ
ထုတ်ပြန်ကြေညာထားလို ့ကျွန်တော် ကို်ယ်တိုင် အကြိမ်ကြိမ် ဖုန်းဆက်တိုင်ကြား
ဘာမှပြန်မဖြေတာလား ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းချသွားတာလားဗျာ။ဒီလိုလုပ်နေကြက
ကိုပေါက်ပို(စ်)ကိုမန်းပီးရောသာွးတာဗျ။ ဟီးဟီး မာွှးတဲ့အခါလည်းမွှားပေမပေါ့။
အရေးယူတာ မယူတာ သူ့ကိစ္စ၊ တိုင်တာမတိုင်တာ ကိုယ့်ကိစ္စ၊ ဘာမှပြောမယ့်လူမရှိလျင် ပိုလုပ်လာမှာပေါ့ အဲဒါဆို လူမိုက်အားပေးလေ၊ သူတို့ကတိုင်သူမရှိပိုဝမ်းသာသေး၊
စကားပုံတစ်ခုရှိတယ်ဗျာ၊ ရိုင်းသွားလျင် တောင်းပန်တယ်၊“ခွေးဝမ်းသာအောင် လေလည်မပေးနဲ့”တဲ့ အဲဒီတော့ တိုင်သာတိုင်ဗျာ
အဲဒါလို ဆိုးပေတေ လုပ်ချင်တာလုပ်နေကြတဲ့အထဲ မှာ ဆိုးရွားစော်ကားတဲ့ အချက်တစ်ခု ရှိသေးတယ် ကိုရဲရင့်သူရေ ။
အဲဒီ ယာဉ်ရပ်နားခ ကောက်ခံသူတွေဟာ ယူနီဖောင်းလေးတွေနဲ ့ဖြစ်တာကြာပြီပေါ့နော…
အဲ… သူရို ့အနေနဲ ့၊ ကောက်ခံရရှိတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို ဘယ်ရွေ ့ဘယ်ပုံ ပြန်အပ်ကြရသလဲ ဆိုတာ မသိပေမယ့် ၊ တွေ ့ရပါများတဲ့ ၂၆လမ်း တစ်လျှောက် က ငွေတောင်းတဲ့ကောင်တွေကတော့ ညနေ ၄နာရီ ကျော်လောက်ဆို သောက်ပြီး ဖြစ်နေကြတာကလား ။ သောက်တာက ကိစ္စမရှိဘူး ထားလို ့ရပေမယ့် ၊ ငနာများရဲ ့လုပ်ဆောင်ချက်က ၊ လမ်းဘေးမှာရပ်လာတဲ့ ကား၊ဆိုင်ကယ် များဟာ အမျိုးသမီးဘဲ မောင်းလာခဲ့တာဆိုရင် ၊ ရိတိတိ ( တာရာမင်းဝေ လို ပြောရရင် ရကျပ်တိတိ ) လုပ်ကြတာကလားဗျ ။ အဲ့ကိစ္စလဲ ပြောကြပါဦး ။